Home Wararka Farmaajo oo Musharaxiintii Hawiye kala wareegay labadii DG ay kasoo jeedeen! Maxa...
Farmaajo oo Musharaxiintii Hawiye kala wareegay labadii DG ay kasoo jeedeen! Maxa u haray?
Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta waxa uu magaalada Muqdisho kulan qado ah oo ay albaabada u xiran yihiin kula leeyahay Madaxweynayaasha sadaxda Dowlad Goboleed ee kala ah Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed.
Kulankaan ayaa ah mid daba socda kulumo gaar-gaar ah ee uu maalmihii u danbeeysay uu Madaxweyne Farmaajo kula lahaa sadaxdaas hogaamiye. Kulankaan ayaa waxa uu daba-socdaa meel-marinta qorshaha Farmaajo iyo Fahad oo ay ku doonayaan in ay si buuxda kula wareegaan doorashada iyo qaab-dhesmeedka doorashadaas.
Shacabka ku dhaqan Dowlad Goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa waxa fajac iyo yaab ku noqotay in Mushraxiintii ka soo jeeday labadaas Dowlad Goboleed ay ku guuldareeystaan inay hantaan hogaanka deganadii ay ka soo jeedeen iskaba daa in ay Farmaajo uga adkaadaan Sadaxda Dowlad Goboleed ee kale ee ka jirta dalka guud ahaantiisa.
Musharaxiinta ka soo jeeda degaanada Hirshabeelle iyo Galmuudg ayaan intooda badan waxa ay kala joogaan magaalooyinka Muqdisho iyo Garowe, iyaga oo aan marnaba isku dayin in ay Farmaajo ku qabsadaan deegaanadii ay iyaga ka soo jeedeen. Farmaajo ayaa u muuqda in uu kufsaday musharaxiintaa.
Xildhibaan ka soo jeeda dowlad Goboleeedka Hirshabeelle ayaa yiri “walaaloow wax la yiraahdo musharaxiin Hawiye oo Farmaajo ka adkaan kara ma arko ilaa iyo iyo hada, ma aqaan waxa gadaal ka imaan doono, laakiin kuwa hada ii muqqda oo gabay in ay Farmaajo kala wareegaan degaankii ay soo jeedeen, rajo badan kama qabo in ay dalkaan hogaamiyaan oo ay naga qabtaan Farmaajo iyo kuwa uu ku shaqeeysto”.
Waxa uu ku daray “ bal ii sheeg waxa ay Garowe u joogaan hadii ay wax isku falayaan, maay tagaan deeganadii ay ka soo jeedeen oo kula dagaalaan Farmaajo, kuwa kalana safar beena ayaa ay dibadaha ugu aadeen halka qaar kalana Xamar ay guryahooda isku soo xireen… yaab….?”